यी हुन् कांग्रेसी आन्दोलनका पाँच अभीष्ट , गोविन्द केसी त एक गोटीमात्र हुन्
सबैलाई थाहा छ-अहिलेको संघीय संसदमा दुई तिहाई सहितको सत्ता पक्ष र बाँकी एक तिहाईभन्दा कम संख्या बोकेर प्रतिपक्ष उपस्थित छ । संविधानले दुईतिहाई बहुमतले संविधान समेत संसोधन गर्न सक्छ । सरकारको नीतिअनुसार ऐन कानुन बनाउन सक्छ । पाँचबर्ष कसैले हल्लाउन नसक्ने वर्तमान सरकारलाई अगाडि बढ्न नदिन अहिले प्रतिपक्ष आफ्नो न्वारानदेखिको बल लगाउदैछ । डा. केसीको अनसनको निहुँ बनाएर लगातार संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ । आवरणमा डा. केसीको अनसन भए पनि नेपाली कांग्रेस आफ्नो अर्कै अभीष्ट पुरा गर्ने ध्याउन्नमा लागेको छ ।
क) पहिलो अभीष्ट : नेकपाको अजेण्डा लागू हुन नदिने
एक चिनियाँ भनाई छ-कसैको भलो गर्नु छ भने उसलाई माछा नदेऊ,बरु उसलाई माछा मार्न सिकाऊ ।” ओली नेतृत्वको सरकारले नेपालमा त्यही भनाईलाई चरितार्थ गर्न खोजेको देखिन्छ । “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” नारा दिएको सरकारले तत्कालका लागि लोकपृय कार्यक्रम भन्दा दीर्घकालीन रणनीति बनाउन खोजेको देखिन्छ । समृद्धिको लागि देशमा विद्यमान तमाम बेथितिको अन्त्य गरेर राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ । तर नेपाली कांग्रेस कम्युनिष्टको नेतृत्वमा आमूल परिवर्तन भएको हेर्न चाहदैन । ऐन कानून मार्फतमात्र परिवर्तन संस्थागत हुने हुनाले ऐन बनाउने थलो संसदलाई यो वा त्यो बहनामा अकर्मण्य बनाइराख्ने दीर्घकालीन रणनीतिमा कांग्रैस लागेको छ । वर्तमान सरकारले जे काम गर्न खोजे पनि अधिनायकवादको हौवा पिटाउने योजना नेपाली कांग्रेसको छ ।
ख) दोश्रो अभीष्ट : देशमा अस्थीरता पैदा गर्ने
नेकपाको दुईतिहाई बहुमत नेपाली कांग्रेसलाई मात्र होईन, केही अन्तराष्ट्रिय शक्ति केन्द्रलाई पटक्के मन परेको छैन । नेपालको संसदलाई कमजोर बनाएर सरकारको विजिनेस जबरजस्ती बाहिरबाट लाद्ने षणयन्त्रमा यो शक्ति हात धोएर लागेको छ । देशमा अस्थीरता पैदा गराएर धमिलो पानीमा माछा मार्न चाहने नयाँ शक्तिका डा. बाबुराम भट्टराई, एकताप्रति असन्तुष्ट माओवादीहरु, जातिवादी नेताहरु कट्टर मधेशवादीहरुसंग अहिले कांग्रेसको हिमचिम ह्वात्तै बढेको देखिन्छ । सत्तापक्षसंग तनाव बढ्दैजादा यो कित्तामा मोहनविक्रम सिंह, किरण र विप्लव पनि मिसिने निस्चित प्रायः छ ।
ग) तेश्रो अभीष्ट : आफ्ना पकेट क्षेत्र जोगाउने
नेपाली कांग्रेस सत्तामा हुँदा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई अनफ्नो पकेट क्षेत्र बनाएको थियो । सरकारी र निजी दुबै क्षेत्रमा आफ्नो हाली मुहाली चलाएको थियो । अधिकांश मेडिकल कलेजलाई आफ्ना नेता कार्यकर्ताको पकडमा राखेर आफ्ना कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाएको थियो । जब स्वास्थ्य क्षेत्रमा बामपन्थीहरुको केही पहुँच बढ्यो, डा. गोविन्द केसीहरु त्यसलाई निस्तेज गर्न निस्के । तिनीहरुलाई नेपाली कांग्रेसलगायतका दलले निरन्तर मलजल गरिरहे, गरिरहेछन् । चिल देखाएर स्यालले चल्ला टिपेजस्तो नेकाको राजनीतिलाई सरकारको बेरोकटोक अग्रगति चाहने जनताले बुझ्न अब बेर लाग्दैन ।
घ) चौथो अभीष्ट : ओलीको लोकप्रियतालाई गिराउने
गत निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका नेताहरु अत्यन्तै अलोकपृय थिए । सभापति देउवाको असक्षम नेतृत्व एउटा प्रमुख कारण थियो भने अरु नेताहरु पनि त्यत्तिकै अलोकपृय थिए । अर्कातिर ओलीसहित अधिकांश बामनेताहरु लोकपृय थिए । फलस्वरुप ओली नेतृत्वको शक्तिशाली सरकार बन्यो । ओली सरकारले जनताको पक्षमा देखिने केही राम्रो काम गर्नुअगावै ओलीलाई अलोकपृय बनाउन सके आफ्नो गुमेको स्पेस बढ्ने नेकाको विश्वास छ । यही विश्वासको आधारमा कम्युनिष्ट विरोधी मिडियाहरु हल प्रधानमन्त्री ओलीको खेदो खन्न प्रयोग भएका छन् । र, ती मिडियाहरुलाई अन्तरराष्टिय शक्तिकेन्द्रहरुले नियन्त्रणमा लिन खोजेको पनि देखिदैछ । यतिमात्र होईन, बामनिकट केही मिडियाहरु ओली सरकारको आलोचनामा प्रयोग भइरहेका छन् । अदालतभित्रको आफ्नो शक्तिलाई पनि सरकारको विपक्षमा उरालिदै छन् ।
ङ) पाँचौं अभीष्ट : सभामुख,उपसभामुख र समितिका सभापति हत्याउने
सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीको हुनु नहुने नेकाको प्रमुख मुद्धा बनेको छ । संसदीय समितिका सभापतिको ठूलै भाग खोजेको छ उसले । प्रदेश सरकारमा पनि प्रतिपक्षको त्यही दाउ छ । संसदभित्रको बार्गेनिङ्गलाई प्रतिपक्षले सडकमा ल्याएर संसदीय पदहरु थप्ने रणनीति प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ ।
यी अभीष्ट पूरा गर्न “लोकतन्त्रवादी”नेपाली कांग्रेसले सार्वभौम संसदलाई पाँच बर्षसम्म निरन्तर आक्रमण गरिरहने छ । आफ्ना ती अभीष्ट पूरा गर्न गोविन्द केसीजस्ता थुप्रै गोटीहरु चालिनेछन् । सत्तापक्षले बडो सजगताका साथ यस्ता गोटी र षणयन्त्र बेलैमा चिनेर अगाडि नबढ्ने हो भने जनताको समृद्धिको चाहनामा तुषारापात नहोला भन्न सकिन्न ।
सरकारसँग दुई विकल्प : पहिले वार्ता नभए अध्यादेश स्थगित
गैंडाकोटमा क्षेत्रीय क्रीकेट रंगशाला मेरो प्राथमिकता : मेयर पौडेल
शिक्षण अस्पतालका निर्देशक दीपक महराद्वारा राजीनामा
सरकार र निजि क्षेत्र मिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्न सकिन्छ : मन्त्री यादव